The Irrawaddy's Blog: ရက်ရက်စက်စက် ပူတဲ့နွေ
ဒီနှစ်နွေက ရက်ရက်စက်စက် ပူပါတယ်။
ရာသီဥတုက အကြီးအကျယ် ဖောက်ပြန်နေပါပြီ။
ပူပြင်းလွန်းတဲ့နေရောင်မှာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ပါဝင်မှုနှုန်းလည်း လွန်ကဲလျက်ရှိနေပါတယ် (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
အသက်ဆုံးရှုံးနှိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အပူဒဏ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ဒီအကြောင်း မောင်ထွန်းလွင်(မိုးလေ၀သ) က သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ မိုးကြိုကာလရဲ့အသံတိတ်လူသတ်သမား ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။
မဖတ်ရသေးသူများအတွက် ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
Heat: Major Killer Heat Awareness Day: May 23, 2014
မေလ(၂၃)ရက်နေ့ဟာ အပူရှိန်လူသတ်သမားရဲ့အန္တရာယ်သတိပြုရေးနေ့ (A Major Killer Heat Awareness Day) ဖြစ်ပါတယ်။
အပူရှိန် (Heat Stress) နဲ့ အပူချိန် (Temperature) တို့ဟာ မတူကွဲပြားတဲ့ လေထုရဲ့ အန္တရာယ်ဘေးဆိုင်ရာ သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ် မတ်လတစ်ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ဧပြီလ(၁၅)ရက်အထိ ကာလကို ပူပြင်းခြောက်သွေ့ တဲ့ နွေရာသီ ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာလရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ နေ့အပူချိန်တွေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့မြင့်တက်လာတတ်ခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အပူချိန်တွေမြင့်တက်လာတဲ့အခါ လူရဲ့ကိုယ်က ကိုယ်အပူချိန်ကို ပြင်ပ အပူချိန် နဲ့ လိုက်ပြီးကိုက်ညှိပေးရပါတယ်။
ဒါကို ကိုယ်ရှိတဲ့ Thermoregulatory System ရဲ့ Therlamus ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
ပုံမှန်အနေနဲ့တော့ ကိုယ်အပူချိန်ကို 35.8 °C – 37.8 °C (96.5°F - 100°F) ကြားမှာ ထိန်းပေးထား နှိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီစံနစ်ကိုအားကိုးပြီးနွေခေါင်ခေါင် မွန်းတည့်ချိန် နေပူကြီးထဲမှာ အကာအကွယ်မဲ့ နေလို့ကတော့
စံနစ်တိုင်းမှာ ကန့်သတ်ချက်ဆိုတာရှိနေတာကြောင့် ကိုယ်မှာခံစားလာရတဲ့ အပူချိန်ကို Therlamus က လိုက်မညှိ ပေးနှိုင်တော့တဲ့အခါ အန္တရာယ်ရှိလာရတော့ တာပါဘဲ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ခံစားရတဲ့အပူချိန်(Feel Temperature)နဲက ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့
Feel Temperature 27 °C – 32 °C (80°F - 90°F) Caution;
Feel Temperature 32 °C – 41 °C (90°F - 105°F) Extreme Caution;
Feel Temperature 41 °C – 54 °C (105°F - 130°F) Danger;
Feel Temperature over 54 °C (over 130°F) Extreme Danger.
Danger အဆင့်တွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများအဖြစ် heat cramps, heat exhaustion တို့အပြင် တစ်ခါတစ်ရန် heat stroke လည်းဖြစ်တတ်ပြီး၊ Extreme Danger အဆင့်တွင်တော့ Heat stroke အများဆုံး ခံစားရတတ်ကြောင်း သတိပေးဖေါ်ပြထားပါတယ်။ Heat Stroke ခံစားရတဲ့သူဟာ ခံနှိုင်ရည်ကိုလိုက်ပြိး လေဖြတ်ခြင်း နဲ့ ဦးဏှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်း (အရပ်အခေါ်) စတာတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အတွက် အသက်ဆုံးရှုံး တတ်ကြ ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဘဲ အပူရှိန်ကို Major Killer လို့ ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နွေကာလပြီးတဲ့ ဧပြီလအလယ်ကစပြီး မုတ်သုံဝင်တဲ့နေ့အထိကာလဟာ မိုးကြိုကာလဖြစ်ပါတယ်။ မိုးကြိုကာလ ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ နွေလက်ကျန်အပူနဲ့ မိုးဦးအကြိုရေငွေ့တို့ အမြောက်အများ
ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် မိုးကြိုကာလအတွင်း လေထုထဲမှာ ရေငွေ့ အမြာက်အများပါဝင်နေတာကို နေ့စဉ်တွေ့နေရပါတယ်။
ဒီအခါ ပူပြင်းခြောက်သွေ့ တဲ့နွေရာသီကာလမှာ လူ့ကိုယ်က ခံစားရတဲ့အပူချိန်ဟာ လေအပူချိန်(air temperature) သက်သက်သာ ဖြစ်ပေမယ့် ရေငွေ့တွေပါနေတဲ့လေထုအတွင်းမှာတော့ လေအပူချိန်အပြင် ရေငွေ့အပူချိန်ပါ ထပ်ဆောင်းလိုက်တဲ့အတွက် လူ့ရဲ့ခံစားရတဲ့အပူချိန်ဟာ လူ့ကိုယ်ရဲ့ ခံနှိုင်ရည်ထက် ကျော်လွန်သွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီအခါမှာ မကြာခဏဆိုသလို Extreme danger level ကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
ခက်တာက Air Temperature ကို Thermometer နဲ့ အလွယ်တကူ တိုင်းတာ သိရှိနှိုင်ပေမယ့် Feel Temperature ကတော့ Air Temperature နဲ့ Relative Humidity (၂)ရပ်ပေါင်းပြီးမှ တွက်ချက်ယူမှ ရနှိုင်တဲ့ တန်ဘိုးဖြစ်တာကြောင့် အလွယ်တကူ မသိနှိုင်ကြပါဘူး။
ဒါကြောင့် မသိလိုက်ရဘဲ အသက်ဆုံးရှုံးရတတ်တဲ့ အတွက် အသ့တိတ်လူသတ်သမား(Silent Killer) လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအန္တရာယ်ဟာ အခုလို မိုးကြိုးကာလ(အပူချိ်န် နဲ့ ရေငွေ့ပါဝင်မှုမြင့်မားနေတဲ့ ကာလ)မှာ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက် အသက်အန္တရာယ်ကို အမြဲခြိမ်းခြောက် နေလေ့ရှိပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်းရန်ကုန်(ကမ္ဘာအေး)မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ခံစားရတဲ့အပူချိန်တွေကို တွက်ကြည့်တဲ့အခါ ဧပြီလ(၁)ရက်မှ (၂၁)ရက်နေ့အတွင်း Extreme Danger (၁)ကြိမ် (၄-၄-၂၀၁၄) နေ့ နဲ့ Danger အဆင့်(၃)ကြိမ်(ဧပြီလ ၁၅-၁၆-၂၀ ရက်) ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ဧပြီလအတွင်းက အပူချိန် 38 °C စိုထိုင်းဆ ၆၀% ရှိခဲ့ရာ ခံစားရတဲ့အပူချိန်ဟာ 55 °C ရှိခဲ့ပါတယ်။ Extreme Danger Level ပါ။
မေလ(၇)ရက်နေ့မှာတော့ အမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်က 36 °C ဘဲ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စိုထိုင်းဆကတော့ ၉၂% အထိမြင့်တက်သွားခဲ့လို့ ခံစားရတဲ့အပူချိန်ဟာ 62 °C အထိ မြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Extreme Danger Level အမြင့်ဆုံးလောက်အထိရောက်သွား ခဲ့ပါတယ်။
သာမာန်လူတွေတောင် မခံနှိုင်လောက်တဲ့ အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရန်ကုန်မှာ အသက်ဆုံးရှုံးခံရမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာရတဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲရာမှ ဖေါက်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာ ရလို့ပါဘဲ။
ဆိုလိုတာက အရင် မ်ုသုံလေတွေပုံမှန်ရှိနေတုံးက အခုလိုဘဲ မိုးကြိုကာလရောက်လာရင် ရေငွေ့ပါတဲ့ လေတွေဝင်လာမယ်၊
အောက်ခံမြေပြင်ကအပူပေး လိုက်တော့ လေတွေဟာ အငွေ့တွေဆိုတော့ ပူရာမှ ပွ၊ ပွရာမှပေါ့ လာပြီး အထက်ကို တက်ကြမယ်။
ကမ္ဘာ့မြေစပ်လေထုလွှာ(Troposphere) အတွင်း အထက်ကိုတက်လာတော့ လေအေးတွေဟာ အအေးဓါတ်ရမယ်။
ဒိတော့ အရည်ဖွဲ့ပြီးတိမ်တွေဖြစ်လာမယ်။ နောက် မိုးရွာချတော့တာပါဘဲ။ ဒါဟာ မိုးကြိုကာလမှာ တေါ့ရတတ်တဲ့ မိုးလေ၀သသံစဉ်တစ်ခုပါဘဲ။
အခုတော့ ရာသီဥတုဖေါက်ပြနမှုတွေကြောင့် ဒီသံစဉ်ဟာ မမှန်တော့ပါဘူး။
လက်ရှိမိုးကြိုကာလအတွင်းမှာ တိမ်ဖြစ်လာပြီး မိုးမရွာတောတဲ့ ကိစ္စ၀တွေ များများလာပါတယ်။
ဒိတော့ လူတွေဟာ မွန်းတည့်ချိန် နေပူကြီးထဲမှာ ရေငွေ့နဲ့ရေချိုးနေရသလို
နေအပူ၊ လေအပူတွေအပြင် ရေငွေ့အပူပါထပ်ဆောင်းလိုက်တော့ ခံစားရတဲ့အပူချိန်တွေဟာ လူ့ကိုယ်ကခံနှိုင်ရည်ကို ကျော်ကုန်တော့တာပါဘဲ။
ဒါကို extreme danger ရောက်တယ်ခေါ်တာပါဘဲ။
စောစောကပြောခဲ့သလို ဒီအပူချိန်က လေထဲရောက်လာတဲ့ ရေငွေ့အချိုးအဆအပေါ်မျာ အများကြီးမူတည် နေလေတော့ ရေငွေ့တွေများလေ၊ ခံစားရတဲ့အပူချိန်က မြင့်လေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ရန်ကုန်မှာက လေထုအတွင်း ရေငွေ့ပါဝင်မှုက နည်းနေပါသေးတယ်။
လက်ရှိ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ရန်ကုန်(ကမ္ဘာအေး)ရဲ့ ပျမ်းမျှအမြင့်ဆုံး အပူချိန် ဟာ 38.75 °C လောက်ရှိနေပြီး၊ စိုထိုင်းဆကတော့ 43% ရှိနေပါတယ်။
နေ့အပူချိန်က ဒီထက် မတက်ဘူးဘဲထားဦး၊ စိုထိုင်းဆကတော့ သေချာပေါက် မုတ်သုံဝင်ကာနီးလေ တိုးလာဦးမှာ သေချာပါတယ်။
ဒီတော့ လက်ရှိရှိနေတဲ့ ဧပြီလရဲ့ပျမ်းမျှနေ့အပူချိန်ကို ထပ်မတိုးဘူးဘဲထား။ စိုထိုင်းဆကတော့ မိုးနီးလေ တိုးလေဖြစ်မှာပါဘဲ။
ဒီတော့ရေငွေ့စိုထိုင်းဆကို တစ်စစနဲကတိုးလိုက်တဲ့အခါ စိုထိုင်းဆ ၆၀% ရောက်တာနဲက ခံစားရတဲ့အပူချိန်ဟာ 57°C ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး၊ Extreme Danger Level ကို စတင်ရောက်၇ှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် နေ့အပူချိန်မတိုးစေကာမူ စိုထိုင်းဆ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလေ ခံစား၇တဲ့အပူချိန်ဟာ တိုးလေဖြစ်လာမှာပါ။
မိုးကြိုကာလ ကမ္ဘာအေးမှာ ဧပြီလရဲ့ နံနက်(၉)နာရီခွဲ မှာ ပျမ်းမျှ စိုထိုင်းဆ ၆၃% နဲ့ ပျမ်းမျှနေ့အပူချိန် 37.3°C ရှိနေလို့ အဲဒီတန်ဘိုးနဲ့တွက်တာတောင် ခံစားရတဲ့အပူချိန် ဟာ 55°C (130°F) ရှိတာကြောင့် Extreme Danger Level ပါဘဲ။
ဆိုလိုတာကတော့ ဧပြီလလယ်ကစပြီး မေလကုန်အထိ ကာလဟာ ခံစားရတဲ့ အပူချိန်တွေဟာ Extreme Danger Level ကို ရောက်နေတာချည့်ပါဘဲ။
အဲဒါဖြင့် အရင်က လူတွေကို Heat stroke ဖြစ်တာ ဒီလောက်မများလှပါဘူး။ အခုတလောကမှ ဒီ case တွေ သိသိသာသာ များလာတာက ဘာကြောင့်လည်း?
ဒါကတော့ ရာသီသတုဟာ အရင်လို သံစဉ် မမှန်တော့လိုဘာဘဲ။ ဘာဖြစ်သွားသလဲ ဆိုတော့ အရင်တုံးက တိမ်တွေင်္ဖြစ်ပြီးရင် မိုးက မှန်မှန်ရွာတယ်။ အပူချိန်က ဒိလောက်မမြင့်ဘူး။
အခုနောက်ပိုင်း အထူးသဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမျာ နေ့အပူချိန်တွေ တိုးလာပြီး၊ တိမ်တွေရှိပေမယ့် မိုးကမရွာဘူး။
ဒီတော့ နေ့အပူချိန်တွေတိုးလာတာကလည်း ခံစားရတဲ့ အပူချိန်ကို တိုးလာစေတယ်။
တိမ်တွေအုံ့နေတော့လည်း လေထဲမှာရေငွေ့တွေများနေပြီး ခံစားရတဲ့အပူချိန်ကို တိုးစေတယ်။ မိုးမရွာတော့ အအေးဓါတ်ကမရတော့ပြန်တာကြောင့် တက်နေတဲ့အပူချိန် တွေဟာ ပြန်မဆင်း တော့ဘူး။
ဒီတော့ မိုးကြိုကာလဆိုရင် အခုနောက်ပိုင်း ခံစားရတဲ့ အပူချိန်တွေဟာ လွန်ကဲအဆင့်ကို ရောက်နေတာများ လာပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးနှိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ်ပေးနှိုင်တဲ့အပူဒဏ်ကြောင့် မေလ(၂၃)ရက်နေ့ကို Heat: A Major Killer Heat Awareness Day လို့ သတ်မှတ်ထားကြောင်းပါဗျာ။
(ကိုယ်ရဲ့အပူထိန်းစံနစ်အကြောင်းရှင်းပြပေးတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းဒေါက်တာစိန်လှအောင် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
Posted in: Health , weather , ကျန်းမာရေး , ထွေထွေရာရာ